पढाइ र सिकाइः एक सिक्काका दुई पाटा, गुरु शिक्षा र अधुनिक शिक्षा प्रणालीकाे टक्राव – Digital Khabar
पढाइ र सिकाइः एक सिक्काका दुई पाटा, गुरु शिक्षा र अधुनिक शिक्षा प्रणालीकाे टक्राव
१४ चैत, काठमाडौं । गुरु पूर्वको एउटा अनन्त एवं महत्त्वपूर्ण खोज हो भने गुरु-शिष्य परम्परा पूर्वको पहिचान हो । यस अनुलोम परम्परालाई पूर्वले नियमित, प्राकृतिक तथा सुल्टो परम्पराका रूपमा लिएको छ ।
यसले गुरुको महत्त्व राम्ररी बुझेको छ, गुरुको गरिमा र आयामको यथातथ्य पहिचान गरेको छ । यति मात्र होइन पूर्वका लागि गुरु सर्वव्यापक हो । यो परम्परा खोलो धाउँने परम्परा नभएर तिर्खा धाउँने परम्परा हो, अर्थात् यस परम्परामा शिष्य गुरुका समीपमा जान्छ र इच्छानुसार आफ्नो ज्ञानको तिर्खा मेटाउँछ । गुरुका बारेमा पूर्व के भन्छ हेरौं –
अर्थात्ः गुरु सच्चा ज्ञानको आविष्कारक र त्यसको संरक्षक हो भने अज्ञानको संहारक पनि हो । समग्रमा गुरु यस जगत्को सिष्टकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमात्मा हो । गुरुका बारेमा गोस्वामी तुलसीदासको भनाइ छ ।
पश्चिमलाई गुरुको नाम र महत्त्व मात्र होइन ठेगाना पनि थाहा थिएन एक दार्शनिकले भनेका थिए। पश्चिमले कहिल्यै जानेन गुरुको आयाम, पश्चिमको शब्द कोशमा शिक्षक-विद्यार्थी (Teacher-student) मात्र रहेको देखिन्छ, त्यसैले पश्चिमाहरू शिक्षक र विद्यार्थीका बारेमा मात्र राम्ररी बताउन सक्छन् ।
उनीहरूलाई गुरु-शिष्यको ज्ञान कम भएकाे र अहिलेसम्म उनीहरू यस रसबाट सर्वथा वञ्चित रहेका छन् । वर्तमान समयमा विश्वभर पश्चिमबाट अयातीत अधुनिक शिक्षा प्रणालीको वर्चस्व रहेको हुनाले पूर्वकाहरू पनि सोही लहैलहैमा लागेर गुरुशिष्य परम्पराबाट ओझेल पर्न थालेका छन् ।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रतिलोम शिक्षा प्रणाली भएको हुनाले यस प्रणालीमा शिक्षक शिक्षार्थीको अनुगामी हुन्छ । शिक्षार्थी जहाँ छ त्यहाँ गएर शिक्षकले शिक्षा दिनुपर्छ । त्यसैले पूर्वका लागि यो परम्परा अप्राकृतिक र उल्टो हो ।
वास्तवमा शिक्षाको आशय ज्ञान हो भने ज्ञानका आकांक्षी शिक्षार्थी हुन्र सो आकांक्षा शिक्षकले पुरा गराउँछन् । प्राचीन शिक्षा प्रणालीलामा गुरुले ज्ञान प्रदान गरेको देखिन्छ भने अहिले गुरुको स्थान शिक्षकले लिएको छ । गुरु र शिक्षकमा भिन्नता रहेको छ । त्यसबेला गुरुका लागि शिक्षण पेसा नभएर आनन्द थियो, सुख थियो । शिक्षकले अतीतबाट प्राप्त सूचना वा जानकारीलाई अघि बढाएको पाइन्छ भने गुरुले ज्ञान प्रदान गरेको देखिन्छ ।
घरमा नबसी गुरूका अधीनमा रहेर ब्रह्मचर्यपूर्वक त्याग एवं तपस्यायुक्त जीवन यापन गर्दै विद्या आर्जन गर्नु परम्परागत गुरूकुल शिक्षा प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य हो । यस प्रणालीमा मूलतः तीन तत्त्व पाइन्छन् । तिनमा गुरु र शिष्यको आत्मिक सम्बन्ध, सत्य, तप, दम, शम आदि साधनहरूद्वारा दृढ चरित्र निर्माण तथा स्वाध्याय अर्थात् अपरा विद्या प्राप्ति ।
गुरुकुल शिक्षा लागि ६ वर्षको उमेरमा गुरूकुलमा प्रवेश गरिन्थाे । कुनै-कुनै गुरूकुलमा सो उमेर भन्दा बढी उमेरकाले पनि प्रवेश पाउने गरेको देखिन्छ । प्राचीन कालमा आठ वर्षमा उपनयन संस्कार सम्पन्न भएपछि गुरुको सान्निध्यमा रहेर विद्या अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले पनि गुरूकुल शिक्षाले दिने अर्थ यही नै हो । त्यतिबेला विद्यार्थीले २५ वर्ष नपुग्दासम्म गुरूको साथमा बसेर विद्या अध्ययन गर्नुपर्थ्यो । पूर्ण ब्रह्मचर्यमा रहेर विद्या अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यसलार्इ ब्रह्मचर्याश्रम पनि भनिन्थ्यो ।
प्राचीन गुरूकुलहरूमा वेद, दर्शन, उपनिषद्, व्याकरण आदि आर्ष ग्रन्थ पढ़ाउनुका साथसाथ गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा, भूगोल, खगोल, अन्तरिक्ष , गृह निर्माण, शिल्प, कला, संगीत, तकनीकी, राजनीति, अर्थशास्त्र, न्याय, विमान विद्या, युद्ध-आयुध निर्माण, योग, यज्ञ एवं कृषि इत्यादि मनुष्यका भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने सबै विषय अध्यापन गराइन्थ्यो ।
प्राचीन गुरूकुलमा पढ़ाइको समय तालिका सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म हुन्थ्यो । सूर्यास्तको समयपछि शिक्षार्थीहरू संध्या, अग्निहोत्र आदि कार्य सम्पन्न गरी रात्रिको भोजनपश्चात् विश्राम गर्थे ।
प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको उद्देष्य वैदिक साहित्य, पुराण, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद् जस्ता पूर्वीय वाङ्मयको अध्ययन मनन तथा सन्ध्यावन्दन, यज्ञयागादिको अनुशीलन, मातापिता, गुरूजन, बृद्ध व्यक्तित्वको सेवा साथै जीवजन्तु, पशुपक्षी, एवं बोटबिरूवाप्रति आत्मिक मैत्रीभावबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ । यस प्रकारको उद्देश्य प्राप्ति गुरूकुलीय शिक्षाबाट मात्र सम्भव भएकाे पाइन्छ।
साथसाथै गुरुकुलमा अध्ययन अध्यापन गर्ने आचार्य र विद्यार्थीहरूले योगाभ्यासद्वारा ईश्वरको सक्षात्कार गरेर भौतिक पदार्थबाट पाउन नसकिने आनन्द प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । सर्वव्यापक एवं आनन्दस्वरूप ईश्वरको प्राप्ति गुरुकुलीय शिक्षाबाट नै सम्भव छ भन्ने कुरा गाउँले सर्बसाधारण समेतमा पुर्याउनु पनि यस शिक्षाको एउटा उद्देश्य हो ।
गुरुकुलमा संस्कृत अथवा नेपाली भाषाका माध्यमबाट अध्यात्म, वैदिक साहित्य, उपनिषद्, पैराणिक साहित्य जस्ता विषयहरू अध्ययन अध्यापन हुनु नितान्त आवष्यक छ । शिक्षाका प्रमुख उद्देश्यहरू –
गुरु-शिष्यका बिच पिता-पुत्रको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने परम्परागत नैतिक अदर्शलाई पुनस्थापित गर्नु ।
भारतवर्षको प्राचीन इतिहासमा गुरुकुलको ज्यादै ठूलो महत्त्व थियो । त्यसबेला प्रसिद्ध आचार्यद्वारा सञ्चालित गुरुकुलमा अध्ययन गरेका शिक्षार्थीले ठुलो सम्मान पाउँथे ।
रामले महर्षि विश्वामित्र एवं वशिष्ठद्वारा सञ्चालित गुरुकुलमा अध्ययन गरेको देखिन्छ भने कृष्णले सान्दीपनि गुरुका गुरुकुलमा अध्ययन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी पाण्डवले ऋषि द्रोणाचार्य गुरुका गुरुकुलमा अध्ययन गरेको कुरा संस्कृत साहित्यको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ । गुरुकुलमा अध्ययन गरेका राम, कृष्ण र पाण्डव जस्ता अध्येताहरूले कति सम्मान पाएका थिए भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न सकिदैन ।
भारतवर्षको प्राचीन इतिहास हेर्दा त्यस बखत तिन प्रकारका शिक्षण संस्था रहेको पाइन्छ, जस्तै- गुरुकुल, परिषद् र तपस्थली । गुरुका आश्रममा गुरुका साथ रहेर अध्ययन गर्ने संस्थालार्इ गुरुकुल भन्ने गरेको पाइन्छ भने विषय विशेषज्ञद्वारा दीक्षा दिने संस्थालार्इ परिषद् भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सभा सम्मेलनमा प्रवचनद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्ने स्थानलार्इ तपस्थली भन्ने गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्राचीन नैमिसारण्यलाई तपस्थलीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्राचीन कालको गुरूकुलीय शिक्षा सर्वथा निःशुल्क थियो । गुरुकुलको खर्च गाउँलेको दान र सरकारी अनुदानबाट चल्थ्यो । गुरूकुलीय शिक्षाको व्यवस्था गाउँदेखि टाढा जङ्गलमा गरिन्थ्यो । त्यसबेला छात्र र छात्रा दुबैका लागि गुरूकुलीय शिक्षा दिने गरेको पाइन्छ ।
पौराणिक कालभन्दा धेरैपछि गुरुकुलीय शिक्षाले विश्वविद्यालय तहसम्म फड्को मारेको देखिन्छ । यसै क्रममा प्रचीन भारतवर्षमा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभीपुर आदि प्रसिद्ध गुरूकुल संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ भने आधुनिक कालमा सर्वप्रथम हरिद्वारको कांगड़ी नामक गाउँमा सन् १९०२ मा गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालयको स्थापना स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वतीले गरेको देखिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा पनि केही स्थानमा गुरूकुल शिक्षा सञ्चालित छन् । यस प्रणालीको विकास, विस्तार र पुनःस्थापना गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । यसबाट मात्र राष्ट्रको गुमेको अध्यात्म, संस्कृति र परम्परागत गरिमा पुनः प्राप्त हुन सक्छ ।
नेपालमा गुरुकुल शिक्षा
प्राचीन कालमा गुरुकुलको जुन किसिमको स्वरूप थियो नेपालका गेरुकरलहरूमा पनि त्यही किसिमको स्वरूप रहेको पाइन्छ । खासगरी भारतवर्ष (उत्तरमा हिमालयदेखि शृङ्खलादेखि खक्षिणमा कन्याकुमारीसम्म र पूर्वमा बङ्गालको खाडीदेखि पश्चिममा अरब सागरसम्म) को गुरुकुल पद्धति दुइर्वटा परम्परामा रहेको पाइन्छ – शैव परम्परा र वैष्णव परम्परा ।
शैव परम्परामा शिवबाट पार्वतीले प्राप्त गरेका विद्या पर्दछन्, जसमध्ये व्याकरण, तन्त्रविद्या, सङ्गीत विद्या आदि प्रमुख छन् भने वैष्णव परम्परामा नारायणबाट ब्रह्मा → वशिष्ठ → शक्ति → परासर → व्यास → शुकदेव → गौडपाद → शङ्कराचार्य आदिका क्रमले विकसित भएको पाइन्छ । विशेष गरी नेपालका शिमशृङैखलालार्इ प्रचीन ऋषिमुनिको साधनास्थलका रूपमा लिइन्छ । व्यासको साधनाभूमि र याज्ञवल्क्यको साधनाभूमि नेपाल नै हो मन्ने मान्यता रहिआएको छ ।
मल्लकालीन गुरुकुल शिक्षा
शाहवंशीय गुरुकुल शिक्षा
वर्तमान गुरुकुल शिक्षा
२००२ मा पद्मसमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि कमजोर हुंदै गएको गुरुकुल शिक्षा पाचासको दशकदेखि क्रमश: कछुवा गतिमा अगाडि बढ्दै गएको छ । वर्तमान समयमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि गुरुकुल शिक्षालाई मूल प्रवाहमा ल्याएको छ । देवघाटमा रहेका गुरुकुलमा महेश संस्कृत गुरुकुल, परमानन्द संस्कृत गुरुकुल, वेदवेदाङ्ग गुरुकुल निकै सम्पन्न देखिन्छन् । यिनिहरूको सञ्चालन व्यवस्था पनि उत्कृष्ट रहेको पाइनछ ।
सनातन धर्ममा जल, अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, वायु आकाश, रुख, ढुंगा, माटो लगायतका प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुहरूलाई देवताको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा छ । प्रत्येक वस्तुमा देवताको वास हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार प्रकृतिका हरेक अंगको पूजा गर्दै तिनको समुचित प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ । शुक्ल यजुर्वेदको ३६ र १७ मा रहेको यस ऋचामा सनातन धर्ममा प्रकृतिको महत्वबारे यसरी बताइएको छ – द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षम् शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वम् शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेधि – अर्थात् आकाश, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधी, वनस्पति, विश्वेदेव, ब्रह्मरूप ईश्वर लगायत सबैमा शान्ति होस् र सबैतिर भएको शान्ति मेरो लागि पनि होस् । यसरी हेर्दा कति विशाल र उदार देखिन्छ हाम्रो सनातन धर्म ।
आज मानिसकै कारणले गर्दा जलका भण्डार, बोटविरुवा आकाश पाताल सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुहरू दूषित बन्न पुगेका छन् तिनमा अशान्ति छाएको छ । यसको परिणाम देखिन थालिसकेको छ । जलका स्रोतमा फोहोर गर्नु हुँदैन बिनाकारण रुख विरुवा काट्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा प्रकृतिको संरक्षण भएको थियो ।
उपनिषद्बारे केही पाश्चात्य विद्वान्हरूको दृष्टिकोण
गुरुकुल र आहारविहार
येनकेन प्रकारेण पेट भर्नु मात्र मानवको उद्देश्य होइन । आहार, निद्रा, भय, मैथुन जस्ता विशेषताहरू पशुप्राणीमा समेत रहेको छ । कुनै प्रकारबाट आहार प्राप्त गर्नु उनीहरूको अभीष्ट हो । यावत् प्राणीमा जीवन बाँच्नका लागि अदम्य इच्छा रहन्छ, तर खान नपाएर मर्न लाग्दा पनि शाकाहारी पशुले मासु खाँदैन । हामीले जानेबुझेको कुरा हो विश्वका जीवजन्तु, कीटपतङ्ग सबैले जीवनलार्इ बचाइराख्न मानिसले प्रयोग गरेका कीटनाशक औषधिका विरुद्ध प्रतिकार शक्ति उत्पन्न गर्छन् । रोगका सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवाणु (Bacteria) ले पनि केही समयपछि रोग प्रतिरोधक दबाइका विरुद्ध जीवन बचाउने तरिका खोज्छन् र विष पनि सजिलै पचाइदिन्छन् ।
यो तिनको अदम्य जिजीविषाको परिणाम हो । यहाँ सबैले बाच्न चाहेको, कसैले पनि मर्न नचाहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्राण बचाउनका लागि संघर्षरत पशुहरूलार्इ स्वादका लागि मात्र हत्या गर्नु क्रूरता र विकृतिको पराकाष्ठाबाहेक अन्य केही पनि देखिंदैन, त्यसैले गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलार्इ दुध, फल तथा शुद्ध शाकाहारी भोजन गराइन्छ । मद्य, मांस, धुम्रपान जस्ता आमिषजन्य वस्तुहरू अत्यन्त कडाइका साथ बर्जित गरिएका हुन्छन् यस संस्थामा । सादा जीवन उच्च विचारलार्इ गुरुकुलका आचार्य तथा विद्यार्थीहरूले पूर्णरूपेण परिपालन गर्नुपर्छ र गरेका हुन्छन् । हाम्रा पूर्वीय मनीषिहरूले आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः भनेर गरेको उद्घोषलार्इ अहिले आएर विज्ञानले समेत अनुसरण गरेपछि सात्विक भोजनको महत्त्व र गरिमा चुलिंदै गएको छ । तुलनात्मक रूपमा शाकाहार गर्ने मानिस मांसाहार गर्ने मानिस भन्दा अधिकतम स्वस्थ र दीर्घजीवी भएको छ र हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
शाकाहारीहरूमा मुटुसमबन्धी रोग कम हुने गरेको र उनीहरूमा कोलेस्ट«ल तथा कम घनत्व भएको लायप्रोटिन कोलेस्ट«लको मात्रा सामान्यतया कम हुने गरेको पाइन्छ । अर्को कुरा शाकाहारीहरूमा उच्च रक्तचापको सम्भावना मांसाहारीहरूमा भन्दा कम हुनेगरेको र ठुलो अन्द्राको क्यान्सरको संभावना पनि कम हुने गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ, किनभने शाकाहारीहरू रेसायुक्त फल तथा सब्जीको अधिक प्रयोग गर्दछन् ।
वैज्ञानिकहरूले विश्वभरिको तथ्याङ्कबाट पुष्टि गरेका छन् वनस्पतिमा आधारित भोजन गर्ने मानिसहरूमा स्तन क्यान्सरको संभावना पनि कम देखिएको छ । आहार विशेषज्ञ भारतीय डाक्टर भुवनेश्वरी गुप्ता भन्छिन् – शरीरका लागि शाकाहारी भोजन सबै भन्दा उत्तम हो । उनका विचारमा भारतमा ह्दयसँग सम्बन्धित मधुमेह, क्यान्सर र अन्य रोगहरूको दिनप्रतिदिन बृद्धि भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण अंडा, मांसु र डेरीका उत्पादनहरु ( नौनी, पनीर तथा आइसक्रिम आदि) को बढी खपत हुनु रहेको छ । विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले दिएको रिपोर्ट अनुसार आज पर्यावरणको गंभीर समस्या देखापर्नुमा मांस उद्योग नै प्रमुख कारण रहेको छ । एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन्- एक शाकाहारी व्यक्तिले एक वर्षमा २०० पशुहरूको ज्यान बचाउन सक्छ । उत्तरी अमेरिकाको शाकाहार सोसाइटीले शाकाहारी जीवन शैलीलार्इ बढ़ावा दिनका लागि १९७७ एक अक्टुबरका दिन ‘शाकाहार दिवस’ मनाउन शुरूआत गरेको थियो । पछि त्यसलार्इ अंतरराष्ट्रिय शाकाहार संघले पनि समर्थन गर्यो र अद्यावधि प्रत्येक साल एक अक्टुबरका दिन ‘अंतर्राष्ट्रिय शाकाहार दिवस’ मनाइँदै आएको छ ।
विश्व शिक्षाकाे अवधार्णा
सानै उमेरमा पढ्न पठाउने अभ्यास, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, परम्परागत शिक्षण विधि र परीक्षाकेन्द्रित पठनपाठनका कारण सिक्ने ठाउँ भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रासका केन्द्र बनेका छन्, विद्यालय ।
आईएसटी कलेज, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।
अमेरिकी प्राध्यापक न्यान्सी कार्लसन नेतृत्वको टोलीले बालबालिकाको पढ्ने उमेरबारे सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले छिट्टै विद्यालय जान शुरू गरेका बालबालिकामा डर, अलमल र चिढचिढापन बढ्ने गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो ।
निकै कम उमेरमा विद्यालय गएकै कारण बालबालिका ‘एटेन्सन डिफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिसअर्डर’ (एडीएचडी) जस्ता मानसिक समस्याको शिकार भएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । एडीएचडी हुँदा एकाग्रता नहुने, आत्मबल कमजोर हुने लगायतका समस्या देखिन्छन् ।
विभिन्न अनुसन्धानले पढाइको दबाबले कलिला मगजमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकालिरहँदा विकसित देशहरूले बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुसारको शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका पनि छन् । यसै अन्तर्गत विश्वकै अब्बल शिक्षा प्रणाली रहेको मुलुक फिनल्याण्डले सात वर्ष मुनिका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा नदिने उदाहरणीय अभ्यास गरिरहेको छ ।
‘खेल्दै सिक्ने’ नीति अवलम्बन गरिएको त्यहाँको विद्यालय दिनको चार घण्टा मात्र खुल्छ । अष्ट्रेलियामा विद्यालय भर्नाको उमेर ६ वर्ष तोकिएको छ । बेलायत र अमेरिकाले पाँच वर्ष टेकेपछि मात्र औपचारिक शिक्षा दिन शुरू गर्छन् ।
यी देशका बालबालिकालाई विद्यालय तहमा दिइने गृहकार्य प्राथमिकतामा नपर्ने बेलायतको नटिंघम विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक जेन मिडविलको ‘द बिलिफ्स् एण्ड प्राक्टिसेस् अफ टिचर्स इन प्राइमरी स्कूल’ शीर्षकको शोधमा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, ११ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घरमा पढ्न पनि बाध्य पारिंदैन । त्यहाँ बालबालिकाले के पढ्छन् भन्ने भन्दा पनि के सिक्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका मुलुकमा भने यसको ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । ‘डे केयर’ तथा विद्यालयको खुट्किलो मानिने मन्टेसरी र किन्डरगार्टेनले राम्रोसँग बोली नै नफुटेका बालबालिकालाई बाह्रखरी र एबीसीडी पढाउने गरेका छन् । मन भरुन्जेल खेल्नुपर्ने उमेरमा हाम्रा बालबालिका अधिकांश समय ‘स्कूल’ को घेरामा बस्न बाध्य हुन्छन् ।
एक कक्षाको बच्चा झाेलाभरि किताब बोकेर दिनमा ६ देखि ८ पिरियड पढ्न बाध्य छ । यस्तो सकसपूर्ण पढाइले बालबालिकाको सिक्ने क्षमता विकास गर्छ त ? शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बालबालिकाप्रति विद्यालय र अभिभावकले गरिरहेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छन् । “बालबालिकाको विकासको निश्चित तह हुन्छ” उनी भन्छन्, “औंलाको स्वाभाविक विकास भइनसकेको चार वर्षको बच्चालाई १० पन्नाको गृहकार्य दिइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकामा सिक्ने प्रक्रियाको विकास हुनुको साटो मानसिक विकासमा अवरोध गर्छ ।”
आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र माटो सुहाउँदो शिक्षा पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा बाह्य तौरतरिकाको अन्धाधुन्द अभ्यासले पनि हाम्रा बालबालिका समस्यामा परिरहेका शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् ।
सिर्जनात्मक शिक्षण विधि अन्तर्गत खेल्ने, हेर्ने, सामूहिक अभ्यास गर्ने र सिक्ने भन्दा पनि कडिकडाउसाथ घोकाउने र टन्न गृहकार्य दिने प्रवृत्तिका कारण विद्यालय जानासाथ बालबालिकाहरू बोझले थिचिन्छन्, जसले ‘सिकाइको केन्द्र’ प्रति नै उनीहरूमा नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ ।
मनोविद् डा. गंगा पाठक त्यही सकसपूर्ण वातावरणकै कारण बालबालिकाले विद्यालय जान रुचि नदेखाउने बताउँछिन् । “सानोे उमेरमै मानसिक बोझ् बढ्दा पढाइप्रति नै नकारात्मक असर पर्छ र सिर्जनात्मक क्षमता हराउँछ” उनी भन्छिन्, “बच्चा बेलाको त्यही बोझकाे कारण उच्च शिक्षा पढ्दासम्म नै अध्ययन अरुचिको कुरा बन्न पुग्छ ।”
सन् २०१२ मा सिंगापुरका शिक्षामन्त्री हिङ सुई किटले ‘ज्ञान आर्जन प्रतिस्पर्धा होइन’ भन्दै प्राथमिक तहको परीक्षा खारेज गरेका थिए । ‘सेन्टर अन इन्टरनेशनल एजुकेशन बेन्चमार्किङ’ का अनुसार संसारकै उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली रहेको फिनल्यान्डमा विद्यालय तहमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउने औपचारिक परीक्षा हुँदैन । त्यहाँ विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई ‘जीवनका लागि तयार पार्ने’ शिक्षामा जोड दिइएको छ ।
सफल शिक्षा प्रणाली भएका विकसित देशमा परीक्षा र त्यसमा प्राप्त हुने अंकलाई भन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएका दृष्टान्त हुन्, यी । फिनल्यान्ड सहित अन्य थुप्रै देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षक/प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । विद्यार्थीले न्यून ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) ल्याए वा पढाइसँग जोडिएका अन्य कुरामा कमजोर भए शिक्षक जवाफदेही हुन्छन् ।
एकदुई दिनमै सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छौं : प्रचण्ड
एक घर एक रोजगार, विद्यालयमै करेसाबारी